“Xukumada Haday Ka Go’antahay In Ay Taakulayso Dadkeeda Abaartu Hayso Bal May 15 Million Ee Xaqul Qalinka Dekeda Berbera Oo |
“Xukumada Haday Ka Go’antahay In Ay Taakulayso Dadkeeda Abaartu Hayso Bal May 15 Million Ee Xaqul Qalinka Dekeda Berbera Oo
“Xukumada Haday Ka Go’antahay In Ay Taakulayso Dadkeeda Abaartu Hayso Bal May 15 Million Ee Xaqul Qalinka Dekeda Berbera Oo Qudha Kula Tacalaan Abaarta”.?Cabdikarriim Axmed Mooge Liibaan Mooge
Hargeisa(GNN):-Xaalada abaartu halka ay marayso Somaliland, waxa maanta cashar wax lagu qaato ah muwaadinka isku daldalay tuulada Higlada ee ka tirsan Gobolka Saraar, ka dib markii uu xamili kari wayay culayska abaarta una wayay wax uu ku quudiyo afar caruur ah iyo hoyadood! Waa dhacdo xanuun badan oo ay tahay in shacabka Somaliland ka gurmadaan iyagoon waxba kala hadhayn. Waa dhacdo hadey damiir leyihiin ay tahay in ay ku tosaan kuwa xilalka ummada u hayaa!
Xukumadu iyada ayaa cashuurta gurta, haysa hanti iyo maal wixii ummadani lahayd sidaas darteet masuuliyada kowaad waxay saarantahay xukumada waana in ay samatobixisa dadka abaaruhu saameyeen. xukumada haday ka go’antahay in ay taakulayso dadkeeda abaartu hayso bal may 15 million ee xaqul qalinka Dekeda Berbera oo qudha kula tacalaan abaarta?
Bal may miisaaniyada qaranka ee 2017 badi u duwaan in wax lagaga qabto abaaraha marka laga reebo kharashaadka daruuriga u ah socodsiinta hawlaha qaranka!! Bal may dhamaan dadka xooluhu ka baxeen u sameeyaan xeerooyin lagu quudiyo, waayo ma jirto sabab qoys caydhoobay oo xoolihi ka dhamadeen uu u sii dageenaado miyi cidla ah oo xasuusinaya xooli ka baxay mise waxay sugayaan inta kolba qof isku daldalaayo cidla sida hada dhacdey!
Bal afartaas caruura ah ee aabahood iska daldalay iyo hooyadood uun xukumadu ha xil qaado in ay wakhtiga adag ka saarto! Oo waliba intay u tagaan ha hubiyaan in ay wax cunaan oo seexdaan hurdo nabad ah oo qaranku Aabo haw noqdo!.
Cabdikariim Axmed Mooge,Wasiir Ku-Xigeenkii hore ee Qorshaynta Qaranka JSL